China Jet Mill WP System – Mihatra amin'ny orinasa mpamokatra sy agrochemical Field | Qiangdi
Ny milina Fluidized-bed Jet dia fitaovana tena izy fa ny Material dia nampidirina tao amin'ny masininina tamin'ny alàlan'ny feeder dose, ny vovo-dronono niditra tao amin'ny faritra fanasokajiana, nifandray izy ireo tao amin'ny efitrano fikolokoloana tamin'ny alàlan'ny hetsiky ny hery empira avy amin'ny hafainganam-pandeha. kodiarana sokajy mihodina sy ny centripetal an'ny mpankafy drafitra, ny vovoka mahay dia angonin'ny sivana siklone sy kitapo, ny vovoka be loatra dia mitohy mihodina.
Dingana sy dingana fandidiana
Voalohany, sakafo ara-nofo avy amin'ny mpamatsy - ny famindrana fitaovana mankany amin'ny 3 m voalohany3mixer ho an'ny premixing, ary mpanangona vovoka dia hanangona vovoka mandritra ny fizotran'ny sakafo, avy eo ny 3m faharoa3fivarotana mixer mifangaro fitaovana, avy eo miditra amin'ny fikosoham-bary ho an'ny fikosoham-bary, ny haben'ny sombin-tsolika dia azo ahitsy amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny hafainganam-pandehan'ny fihodinan'ny kodiarana. Aorian'ny fikosehana, ny fitaovana dia hamindra amin'ny siklôna amin'ny alàlan'ny herin'ny centripetal an'ny mpankafy sy mpanangona vovoka eo an-tampon'ny 4m voalohany3 mixer, avy eo afindra amin'ny 4m faharoa3 mixer ho an'ny fampifangaroana alohan'ny fonosana na famindrana amin'ny rafitra WDG.
Jet Mill System - Ampiharo amin'ny drafitra mikoriana agrochemical
Ny rafitra WP dia fitambarana tonga lafatra amin'ny teknolojia fanodinana jet, teknolojia fampifangaroana ary teknolojia fanaraha-maso manan-tsaina. izay vokatra mahafa-po amin'ny famonoana fanafody famonoana bibikely sy fametahana marobe ?, Mandritra izany fotoana izany, mahafaly ny fangatahana tontolo iainana izay tsy tokony hisy vovoka mandritra ny fizotrany rehetra.
Manana talenta teknika mihoatra ny 10 izahay izay nandray anjara tamin'ny famolavolana ny rafitra nandritra ny 20 taona mahery tao amin'ny indostrian'ny vovoka ary manana traikefa manan-danja amin'ny famolavolana, ny fampifangaroana, ny fanamainana, ny pelletizing, ny fonosana ary ny fampitana vovoka. amin'ny tsipika famokarana Agrochemical WP / WDG, Afaka mamolavola ny flowchart mifanaraka amin'ny fitakian'ny mpanjifa izahay mba hahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa amin'ny fitaovana isan-karazany.
Tabilao mikoriana ny tsipika Jet Mill WP WP-fandriana
1.Ny dingana fikosoham-bary dia ny fampiharana ny lozisialy miorina amin'ny fantsom-pandehanana miorina amin'ny alàlan'ny fahombiazana lehibe, ary ny fizarana ny haben'ny sombintsombiny dia mitovy.
2.Ny fizotran'ny famahanana dia miaraka amin'ny fitaterana an'habakabaka tsindry, ampiana ny reraka mba hisorohana ny fipoahan'ny vovoka.
3.Ny fizotran'ny fampifangaroana voalohany sy farany dia mampihatra ireo mixeur visy roa na blender fantsom-bozaka mitsivalana izay miantoka ny fifangaroana dia ampy sy simetrika.
4.Ny outlet vokatra dia afaka mifandray mivantana amin'ny milina fanangonana fiara.
5.Ny rafitra iray manontolo dia fehezin'ny fifehezana PLC lavitra. Fandidiana sy fikolokoloana mora, fiasan'ny fitaovana mandeha ho azy.
6.Fihinana angovo ambany: afaka mamonjy angovo 30% ～ 40% raha ampitahaina amin'ny pulverizers pneumatic rivotra hafa.
7. Izy io dia azo ampiharina amin'ny famotehana ireo fitaovana fampifangaroana avo lenta izay sarotra ho an'ny fitaovana fanorotoroana sy viscous.
Tombony ho an'ny tetika mikoriana samihafa
A. Modely mitohy，Ampiharina amin'ny famokarana betsaka (vokatra QDF-400 Recommended ho an'ny indostrian'ny agrochemical)
1 .Ny fifandraisana misy eo amin'ny mpanangona vovoka sy ny vokatra efa vita dia misoroka ny fivoahan'ny vovoka, tsy mahatsapa fonosana vovoka ary tsy misy loto.
2.Twin screw mixer dia manana endrika mpamolavola sy volo lava, izay mitazona ny fampifangaroana tanteraka ny fitaovana tsy hipetraka eo ambanin'ny asan'ny revolisiona sy ny fihodinana.
B. Modely mitohy, ampiharina amin'ny famokarana betsaka (QDF-400 Horizontal spiral ribbon mixer mix)
1 .Rakitry hopper ara-nofo dia manana famolavolana tsorakazo mifangaro, ary ny visy dia lava be mandra-pahatongany any ambany mba hitazomana ny fivezivezena ara-dalàna.
2.Horizontal spiral ribbon mixer tombony: mora kokoa ny manao vokatra sasany izay mila manampy adjuvant na zavatra simika hafa amin'ny vokatra vita. Ary ny fampifangaroana dia tsara kokoa sy marina kokoa noho ny mixer visy kambana. ambany ny haavon'ny vatana noho ny mixer visy Twin, mora apetraka.
C. Modely mitohy, ampiharina amin'ny famokarana betsaka (famolavolana mixeur kambana QDF-600 kambana)
Na ny dingana fampifangaroana voalohany na farany dia mampihatra ireo mpamporisika roa sosona izay miantoka ny fifangaroana dia ampy sy simetrika. Ny famolavolana kônika dia mitazona ny fitaovana hikoriana moramora.
D. Modely natsotsotra, Natao ho an'ny famokarana batch (QDF-400 fomba famahanana ambony)
Tombony: Mpizarazara amin'ny rivodoza sy mpanangona vovoka: ampio metatra hovitrovitra ny ampahany amin'ny kônina hialana amin'ny fanangonana fitaovana.
E. Modely notsongaina, ampiharina amin'ny famokarana batch (QDF-400 Fandraisana sakafo ambany)
Tombony: Mpisaraka siklone: ​​ampio mpampisaraka siklone iray hafa aorian'ny feeder hanaparitahana ny làlan'ny fikorianan'ny akora ary hisorohana ny fanangonana fitaovana.
Pabrikan'ny fambolena any Pakistan, famonoana vovoka ary famonoana herisetra, setrin'ny famokarana mitohy QDF-400 WP, famokarana 400kg / h, haben'ny potika D90: 45μm
Orinasa fambolena Burma, famonoana bibikely ary famonoana herisetra, setrin'ny QDF-400 WP nanamora ny tsipika famokarana, fahafaha-mamokatra 400kg / h, haben'ny potika D90: 30μm
Fambolena fambolena Egypt, famonoana bibikely ary famonoana herisetra, setrin'ny famokarana mitohy QDF-400 WP, famokarana 400kg / h, haben'ny potika D90: 20μm
Teo aloha: Jet Mill Mill-fandriana GMP FDA
Manaraka: QDF-400 WP Rafitra famokarana mitohy an'ny Jet Mill Ho an'ny 400kg